Ukwahlula kwedatha okuchazwe nguSemalt
I-WebHarvy yinto eyaziwayo . Ikhupha ngokuzenzekelayo idatha ukusuka kumaphepha ahlukeneyo ewebhu kwaye igcina umxholo kwiifom ezithandayo. Nge-WebHarvy, unako ukurhweba idatha kwiiwebhsayithi zeekhnoloji, amajelo, iimpapasho zeendaba, ii-portals zokuhamba kunye ne-e-commerce sites. I-WebHarvy iqulethe ubutyebi bezinto eziphambili ezenza sikwazi ukuvuna idatha kwiindawo ezinzima kalula. Ezinye zezona zinto zivelele zichazwe ngezantsi.
1 - planning menu semaine excel. I-WebHarvy icoca imifanekiso kunye namavidiyo:
Nge-WebHarvy, unokukhipha idatha kwimifanekiso oyikhethileyo kunye namavidiyo kalula. Esi sixhobo siqala ukubonisa uhlobo lomfanekiso kwaye siyihlwitha njengemfuno zakho. Ingakumbi ikhupha ulwazi oluvela kwiifayile zePNG kunye neJPG, kodwa unokukhupha idatha ukusuka kumaphepha e-PDF.
2. I-WebHarvy iququzelela umxholo wakho wewebhu:
Enye into ehlukileyo yeWebHarvy kukuba iququzelela umxholo wakho wewebhu kwaye ikunceda ukuba uyipapashe ngokukhawuleza. Kufuneka ulungele iiflathi ezimbalwa, kwaye iWebHarvy izakukhuphela umxholo kwi-hard drive yakho usebenzisa i-offline. I-WebHarvy ifanelekileyo kubantu abangenazo izakhono zenkqubo kwaye bafuna ukuseka amashishini abo.
3. I-web crawler enegunya elinamandla:
Ngokungafani nezinye izixhobo zokucoca idatha eziqhelekileyo, i-WebHarvy iyakhupha amaphepha akho ewebhu kwaye isinceda ukuphucula i-website ye-injini ye-injini yakho. Unokwenza iifom zokubhuka kwi-intanethi kunye neefom yeejini zokukhangela nge sixhobo. Ukongeza, i-WebHarvy izakukhangela amagama akwii-key kwaye iyakucima idatha yakho ngaphandle kokuphazamisa umsila omdala kunye nomnxeba omfutshane.
4. I-WebHarvy ikhupha idatha kwiiwebhusayithi eziguqukayo:
Uninzi web scraper alukwazi ukukhipha idatha kwiiwebhusayithi ezinamandla kwaye ushiye ezininzi iimpazamo kwiziphumo. Kodwa i-WebHarvy ilungisa zonke iimpazamo kunye nempazamo yokupeliswa kwimveliso. Uvuna idatha kwiiwebhusayithi ze-AJAX kwaye uyilanda ngqo kwi-hard drive yakho.
5. I-WebHarvy idlulisela idatha kwiifom ezahlukeneyo:
Nge-WebHarvy, ungathumela idatha kwi-Excel, CSV, XML, JSON, SQL Server, Oracle, MySQL kunye ne-OleDB. Ukongeza, esi sixhobo singathumela idatha kwi-Excel 2003 kunye ne-Excel 2007. Idatha iya kugcinwa ngokuzenzekelayo kwifom efiselekayo.
6. I-WebHarvy inikeza ukhuselo logaxekile:
Nge-WebHarvy, unokuqinisekisa ukhuseleko lwakho kunye nobumfihlo kwi-intanethi.Esi sixhobo asikwazi ukucwangcisa idatha kwiiwebhusayithi ezinobungozi kwaye sinika ukhuseleko olupheleleyo logalelo kubasebenzisi balo.
7. Shedyuli I-Web Web Scraping Sessions:
Nge-WebHarvy, unokwenza ishedyuli iiseshoni ze-web scraping kwaye unokugqiba ukuba mangaphi amaphepha ofuna ukuwaqesha kwiyure. Esi sixhobo sinokukhangela amaphepha ewebhu angama-10 000 kumaminithi angama-30 kwaye angenza amaprojekti amakhulu ekuhlamba iwebhu ngosuku.
8. Ukudibanisa ngokubanzi kunye ne-API yayo:
Le sixhobo ye-web scraping ine-API evulekile, enceda ekudaleni nasekuguquleni iiprojekti zokutsala i-web kalula. Unokwenza izicwangciso zayo kwaye uzikhuphe idatha ngokusebenzisa i-API enye okanye ama-API amaninzi.
9. I-WebHarvy ifumanisa idatha yedatha:
Nge-WebHarvy, unokubona umxholo we-duplicate kwaye ungayilahla ngoko nangoko. Kubalulekile kwi-webmaster ukupapasha umxholo wekhontrakthi yee-rankings ezingcono ze-injini. I-WebHarvy iyithuluzi elizenzekelayo elifumana idatha yedatha kwaye lilungisa ngokukhawuleza, ukwenza umsebenzi wakho ube lula.
10. I-WebHarvy - I-SEO isixhobo esinobungane:
Nge-WebHarvy, unokwenza idatha yeemet tags, imifanekiso, izikhonkwane zangaphakathi kunye zangaphandle kunye neetek iimpawu. Ithuluzi elinobuchule le-SEO elinceda ukuphucula i-rankings injini yeziko lakho.